Osisi kpuchie → Ntuchasị nke osisi na nchara • CLỌ OBI
obecnie Obere ụlọ ime obodo ya kwa kpuchie osisi. Enwere ike ịme ihe ndị a na-arụ ọrụ ma na-achọ mma n'ọtụtụ ngwa.
Osisi ndị dị ime obodo bụ nkwa nke ahụike nke ndị bi na ụlọ, izu ike na obi ụtọ maka ndị mmadụ na-ebi na mpaghara ndụ ndụ ndụ. Osisi na-eme ka ikuku dị ọcha, na-emepụta ikuku oxygen, belata ọnọdụ ikuku na ụbọchị ọkụ, na-abawanye iru mmiri ikuku, meziwanye njikwa mmiri ma belata mkpọtụ obodo na ike ikuku.
Kaosinadị, ka ha wee tolite ma tolite nke ọma, a ga-enwerịrị nchebe ka ha ghara imebi ihe ndị nwere ike ibibi ha.
Ọ bụ ya mere eji eji osisi kpuchie ọtụtụ oge, nke zuru oke ọ bụghị naanị na ogige na n'ámá, kamakwa na ogige na n'obere obodo.
Ihe mkpuchi ahụ na-echebe osisi ndị ahụ pụọ na anụmanụ, ndị na-agba ụkwụ na ụgbọ ala na-anya ha.
Osisi kpuchie ya na ọla ya na ihe nchara
Osisi kpuchie na osisi grey maka osisi na ụrọ-n ’osisi na-emepụta ihe ịchọ mma maka osisi dị ọ bụghị naanị n’obodo mepere emepe, kamakwa ubi.
A na-emepụta ha n'ụdị dịgasị iche iche.
Ihe mkpuchi nke osisi iron a na-egwuputa nwere ihe ịchọ mma na nke ọhụụ iji dabara adaba na mpaghara obodo na mpaghara.
Lee kwa: Ogige, ogige na bench dị
Osisi nche nke echebere maka nchekwa nwere ike ịbụ kwụ ọtọ ma ọ bụ vetikal.
Ihe mkpuchi ahụ, nke a rụrụ dị ka ihe na-eme ka mmiri na-adọ, ma ọ bụ, osisi gril, na-echebe sistemụ osisi ahụ megide mmebi ahụ ọ bụla na-arụ ọrụ, na-ahụ na enwere mmiri ọ bụla.
vetikal kpuchie osisi Ha na-arụ ọrụ na-enye nchebe na ịchọ mma, na-ahụ na enwere ike ito eto n'enweghị ihe egwu sitere na ndị na-agafe, site na ugbo ala ma ọ bụ anụmanụ.
Lee kwa: Ogwe osisi ubi na akụrụngwa ha - nke kacha mma?
Thezọ dabara adaba nke mkpuchi osisi ejiri mee ha na-eme ka ha bụrụ akụkụ nke obere ụkpụrụ ụlọ na-achọ oghere obodo ukwu.
Ihe mkpuchi nke ọla na-arụ ọrụ na ọmarịcha osisi maka osisi bụ ihe nchebe dị oke mkpa maka osisi, ma na-ekele ụdị ha na agba ha n'oge a, ha ghọrọ ihe ịchọ mma nke ọhaneze.
Osisi kpuchie na obere ụlọ, nke nwere ihe ịga nke ọma n’ime ụlọ ndị mepere emepe, ebe a na-eji ahịhịa ndụ emepe emepe n’obere ebe, dị ka ihe ịchọ mma n’usoro ihe ndị metụtara ịzụ ahịa na ụzọ nkwukọrịta.
Ihe mkpuchi ọla maka osisi bụ ọgwụ ndị a na-achọ mma nke na-echebe ahịhịa dị n'ime obodo, mana n'otu oge ahụ na-ekwe ka mmiri na-akpata.
Lee kwa: Igwe eji igwe kwụ otu ebe - ụdị na uru
Osisi ndị dị n'obodo ukwu bụ ihe kachasị emerụ emerụ, ọ bụghị naanị mmebi kemịkal, kpatara, dịka ọmụmaatụ, site na oke ọkụ na-akwụ ụgwọ ụgbọ ala, kamakwa mmebi ọrụ. N'ihi ya, ha chọrọ nlekọta pụrụ iche. Yabụ na n’ebe ndị nwere obere ohere na ụgbọala dị arọ na ndị na-agafe agafe, ekwesịrị ịchekwa mpaghara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'obodo ukwu. Mkpuchi osisi dabara adaba na-echebe ihe ọkụkụ ahụ ọ bụghị naanị imebisị ihe, kamakwa megide ihe ndị ọzọ.
Kwụsị grilles na vetikal mkpuchite mere nke nkedo ígwè na metal bụ oké eguzogide ọgwụ mpụga ihe na n'ibu mmebi, n'ihi ya, ha n'ụzọ zuru okè na-echebe osisi. Ihe dị iche iche nke mkpuchi osisi, dabara nke ọma na osisi na oghere obodo, bụ ihe ịchọ mma ọzọ nke ebe ahụ.
Traditionaldị osisi ma ọ bụ nke ọhụụ na -emechi emechi dabara nke ọma na njiri mara nke oghere obodo mepere emepe.
Lee kwa: Nsu posts
A na-ejikwa ndị na-elekọta osisi na-agbanwe agbanwe na ubi na ubi mkpụrụ osisi, ebe ha na-echekwa mkpụrụ osisi dị mma megide mmebi nke ụmụ anụmanụ na-ata ahịhịa ma ọ bụ akwụkwọ nke osisi. Mkpụrụ osisi na-ekpuchi ha di nkpa ka odi n’obodo, maka na ha n’etinye nchekwa osisi n’ogbo na ebe nlebara anya.
Mgbe ụfọdụ egwuregwu ọhịa ma ọ bụ ahịhịa amị amị na-emebi osisi na-enweghị atụ, ọkachasị obere osisi. Mkpuchi osisi dabara adaba ga-enyere ha aka itolite nwayọ.
Mkpuchi obere osisi ga-egosipụta nke ọma n'oge oyi, mgbe anụ ọhịa na anụ ọhịa na-achọ nri ma na-atụsi anya ike n'osisi n'ubi. Ihe mkpuchi dị otú ahụ ga-eme ka osisi ahụ nwee ikuku na ọkụ zuru oke, n'otu oge ahụ gbochie ụmụ anụmanụ imebi ogwe osisi ahụ.
Ka ị ghara imebi mkpọrọgwụ nke osisi mkpụrụ osisi na osisi a na-achọ mma n'oge ịgha ahịhịa, ọ bara uru iji mkpuchi osisi na-ekpuchi mgbọrọgwụ ma gbochie uto ahịhịa dị na osisi.
Mkpuchi osisi abụrụla ihe na - egbochikwa ahịhịa na ebe ahịhịa ndụ n'obodo mebiri emebi. Na mgbakwunye na mkpuchi, a na-eji ụdị osisi gris dị iche iche iji chebe sistemụ osisi ahụ megide mmebi ma hụ na ịnweta mmiri ahụ.
Lee kwa: Posts dị ịtụnanya
osisi acro achoro osisiOsisi gratesọnụahịa lattice osisiosisi gram osisinchara bọọlụ nke osisiigba iron grey nke osisiigba bọọlụ nke osisiobere ụlọ owuwu ụlọ maka osisiihe mkpuchi nke osisi maka osisiosisi ahuru nke greykpuchie osisiEtu osisiosisi maka osisi castoramaọnụahịa osisi osisiosisi ụjọ osisi merlinekpuchi maka osisi na-acha anụnụ anụnụcasings maka obi osisikpuchie maka osisi olxAhịhịa mkpụrụ osisiAhịhịa mkpụrụ osisi Allegroọnụ ọnụ mkpụrụ osisi mkpụrụ osisiire mkpụrụ osisionye na emeputa osisimkpuchi osisi maka osisintupu kpuchie maka osisiOsisi na-eche nche na igwe na nza nke osisi greyihe mkpuchi nke osisi maka osisikpuchie osisiosisi ji ekpuchi ọnụahịaosisi na-ekpuchi obere ijeekpuchi maka osisi mkpụrụ osisiukwu osisi sochiriọnụ ọnụ osisi gbara akpụosisi anaghị akwụ ụgwọihe nkedo osisi osisi